Maxkamad ku taalla Talyaaniga oo dib u furtay dacwad ka dhan Xaashi Cumar Xasan. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Maxkamad ku taalla Talyaaniga oo dib u furtay dacwad ka dhan Xaashi Cumar Xasan.
Xabsi 16-sanno kadib, Xaashi Cumar Xasan waxa uu haatan u muuqdaa Nin aan wax lug ah ku lahayn Dembigii lagu soo oogay, iyadoo Markhaatigii hore u eedeeyey haatan sheegayo in laga codsaday inuu markhaati been ah ku furo Xaashi Cumar Xasan.
Maxkamadda Rafcaanka ee magaalladda Perugia ee dalka Talyaaniga ayaa shalay oggolaatay in dib loo furo Dacwadda loo haysto Xaashi Cumar Xasan, kaasi oo horey loogu soo eedeeyey dilkii Saxafiyad Talyaani iyo Sawir-qaade lagu dilay magaalladda Muqdisho muddo haatan laga joogo 22-sanno.
Guddiga Difaacayaasha waxay doonayaan inay Xaashi Cumar Xasan noqdo Dembi-laawe, iyadoo bishii June ee sannadkii hore lagu sii daayey Badbaadada Adeegyadda Bulshadda Talyaaniga.
Xaashi Cumar Xasan waxaa uu soo dhamaystay Xabsi 16 sanno oo ka mid ah 26-kii sanno ee horey loogu xukumay.
Eedeysane Xaashi Cumar Xasan ayaa la sheegay inuusan wax lug ah ku lahayn dilkii Saxafiyadda la oran jirey Ilaria Alpi oo 32-jir ahayd iyo Sawir-qaade Miran Hrovatin oo 45 jir ahaa, kuwaasi oo bishii Maarso 20-dii ee sannadkii 1994-kii lagu dilay magaalladda Muqdisho.
Labadaas Saxafi ee lagu dilay Muqdisho ayaa u shaqeyn jirey Telefishinka Dowladda Talyaaniga ee RAI, Channel 3.
Bishii Feberaayo ee la soo dhaafay, Markhaati muhiim ah oo lagu magacaabo Axmed Cali Raage ayaa u sheegay Baarayaasha Talyaaniga inuusan Xaashi Cumar Xasan wax lug ah ku lahayn dilkaasi.
Axmed Cali Raage, isagoo la hadlayey Telefishinka RAI, Channel 3 ayuu sheegay in isaga laga codsaday inuu si been ah ugu markhaati furo Xaashi Cumar Xasan inuu dilay Suxufiyiintaasi.
“Ma aan arkin cidda riday rasaasta lagu dilay Suxufiyiintaasi” ayuu Axmed Cali Raage u sheegay Telefishinka, wuxuuna sheegay inuu ka laabtay Markhaatigii beenta ee uu horey uga bixiyey Kiiskaasi.
Dhinaca kale, Hooyadda dhashay Saxafiyadda la dilay ayaa shalay ka soo hor muuqatay Maxkmaadda, iyadoo hareer taagnayd Xaashi Cumar Xasan oo ah ninka looga been abuurtay inuu dilay gabadheeda.
Hooyada oo lagu magacaabo Luciana Alpi waxay Xaashi Cumar Xasan u rajeeysay Nasiib Wanaagsan.
Aabaha iyo Hooyadda dhalay Saxafiyadda Talyaaniga ee 22 sanno ka hor lagu dilay magaalladda Muqdisho waxay Maxkamadda ka hor sheegeen inay fahamsan yihiin inay wax qaldan yihiin, balse ay had iyo jeer taageeri jireen Xaashi Cumar Xasan.
Hooyadda iyo Ninkeeda oo Garyaqaano ah waxay sheegeen in Caddaalada laga been sheegay, una baahan yihiin inay arkaan Runta dadkii ka dambeeyey dilka gabadhooda Ilaria Alpi iyo Sawir-qaade Miran Hrovatin.
Hay’adaha QM ee ka shaqeeeya Somalia oo codsanayo Malaayiin Dollar ay u adeegsadaan Hawlaha Samafalka ee sannadkan.